विचार/व्लग Archives - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
 राजन शर्मा सापकोटा यो आलेख पढ्नुअघि तपाईँहरुको मनमा प्रश्न उब्जन सक्छ कि, किन लेखकले प्रजातन्त्रको बारेमा लेख्न यस्तो अनौठो विषयलाई छानेको होला ? प्रश्न उठ्नु पनि स्वभाविक नै हो । म आफैँ पनि प्रजातन्त्र यो हो र त्यो हो भनी लेख्न रुचाउने हैन । अझ मैले त यो आलेख तयार गर्नुअघि ‘द कलर अफ
राजन शर्मा¸दोलखा लेख लेख्न त्यति जाँगर कहिल्यैै लागेन । एकजना साथी, ऊ प्रायः अनलाइन तथा कहिलेकाहीँ छापा मिडियामा लेख लेखिरहन्छ, ले मलाई ज्यादै कर गरिरहन्थ्यो लेख्न । म भने अल्छी । लेख्न थाल्यो पूरा नगर्ने । टपिक चुज ग¥यो, अर्कातिर ध्यान जाने । त्यसमा पनि मलाई साहित्य कम मन पर्ने । लेख्न पनि कहाँ सजिलो
माघ १६, चरिकोट । शहिद दिवसको अवसरमा नेपाली लेखक संघ दोलखाले ‘कविता बाचन तथा शहिदको सपना र बर्तमान अवस्था’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम चरिकोटको खबरदार डाँडामा सम्पन्न गरेको छ । सम्वृद्ध देशका सुखी नागरिक बनाउने सपना बोकेर आफ्नो जीवन आहुती दिने शहिदहरुले कोरकोे बाटोलाई राजमार्ग बनाउने अभियानमा हिँडेको कार्यक्रममा प्रस्तुत अधिकांश कविताका भाव थिए । कविहरुले
डा. माधव प्रसाद लम्साल अहिलेसम्म डेंगु रोग नेपालका ५६ जिल्लामा फैलिइसकेको छ र ६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । जनस्तरबाटै सावधानी अपनाउन सके नियन्त्रण गर्न सकिने यो रोगका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. माधवप्रसाद लम्सालको लेख, प्रस्तुत छ……… डेंगुको संक्रमण भएको लामखुट्टेर यसले पारेका अण्डा, प्युपा र लार्भा बाट हुर्कने
राजाराम कार्की दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का आठ राष्ट्रले आगामी पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादनलाई दोब्बरले वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँमा सम्पन्न सार्क राष्ट्रका कृषि वैज्ञानिक÷विज्ञहरुको सम्मेलनबाट पारित धारणालाई कार्यान्वयन गर्न सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सो सम्मेलन यही असोजको ४ देखि ७ गतेसम्म आयोजना भएको थियो । सार्क सदस्य
– ः संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वलाई रोहिङग््या जातीविरुद्ध भएको भनिएको अपराधमा न्यायालयको सामना गर्नुपर्ने बताएको छ । यहाँको सेना कारबाहीको भोगी होला भन्ने बिषय लामो र जटील छ । आफ्नो सहयोगीविरुद्ध ल्याइने कुनै पनि कारबाहीको मागलाई अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लान चीनले अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । राष्ट्रसंघीय तथ्य–अन्वेषण टोलीले सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा
आमसञ्चार तथा पत्रकारिताको स्नातकोत्तर तहमा सार्क मिडिया विषयको हालै सम्पन्न परीक्षामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सोधेको प्रश्न थियो– सदस्य राष्ट्रबीचको आफ्नै कारणले सार्कले आफ्नो १९ औँ शिखर सम्मेलन त आयोजना गर्न सकेको छैन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकासमा यस्तो सङ्गठनबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, सार्कसँग सम्बन्धित विद्यालय, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम या अरु क्षेत्रमा
स्थानीय तहबारे भ्रम र यथार्थ : कर्मचारीको अनुभव
– सञ्जय नेपाल – यसै वर्षको बैसाख महिनादेखि म निजामती सेवाको संघीय तहबाट स्वेच्छाले स्थानीय तहमा सरुवा माग गरी कार्यरत छु । समय छोटै भए पनि स्थानीय तहका केही तितामिठा अनुभवहरुलाई बाँडौ भनी यो लेख पस्किएको छु । प्रस्तुत लेखबाट म जस्ता हजारौं साथीहरु जो स्थानीय तहमा जानुभएको छैन, उहाँहरुलाई समेत स्थानीय तहको बारेमा रहेका